UngayiRekhoda njani iAudio yePremiyamu yoMgangatho ngeWebhu | Martech Zone
NgoMgqibelo, Matshi 18, 2017 NgoMvulo, Matshi 27, 2017 Douglas Karr
Ngezisombululo ezinje ngeSkype, isoftware yokunxibelelana, kunye neVOIP, ucinga ukuba ukurekhoda abantu ababini kwihlabathi liphela kunokuba yeyona nto ilula emhlabeni. Ayiyo. Kwaye kuyaphazamisa.
Ngokuqinisekileyo, ukuba unabantu ababini abanezixhobo ezigqwesileyo kunye ne-bandwidth ephezulu, inokwenziwa. Ingxaki ivela xa uneendwendwe kwi-podcast yakho evela kwihlabathi liphela ezingenayo i-Hardware okanye i-bandwidth. Isiphumo kukuba uhlala unodliwanondlebe apho uvakala umangalisa, kwaye undwendwe lwakho luvakala ngathi bakumtya kunye netoti.
Isandi esimnandi sisitya i-320kbps okanye ngaphezulu kwe-bandwidth, ke ayisiyonto ingaqhelekanga ukuba iinkonzo zokuhambisa iaudiyo ukucinezela okanye ukucofa iaudiyo ukunciphisa iimfuno zabo zebhendi okanye ukunceda abathengi abanomda ophantsi. Nokuba yeyiphi na indlela, ayikulungelanga xa urekhoda.
Masihambe kumaqonga ezwi aqhelekileyo kunye nemicimbi:
skype Ngelixa i-Skype yamkelwe ngokubanzi kwaye ihlala ifumaneka ngasemva kweefirewall zomdibaniselwano, iaudio ehanjiswayo ayisoloko ikumgangatho wayo opheleleyo. Nokuba unayo imakrofoni enkulu kunye ne-bandwidth, isandi sinokuklipa kunye nokuswela ukuthembeka kwemithombo nganye. Kwaye ukuba usebenzisa irekhodi leSkype, awungekhe usebenze ngokuzimeleyo kwilizwi ngalinye.
Isoftware yeTeleconference -I-Skype yeShishini, iWebhuex, ukuhlangana kweGoToMeeting, Uberconference… onke amaqonga aqinileyo kodwa aneengxaki ezimbalwa. Okokuqala, ayinguye wonke umntu ozisebenzisayo. Okwesibini, amashishini ahlala evimba amazibuko anokufuna isoftware. Okwesithathu, abasoloko benelona zinga liphezulu lesandi, nokuba Okwesine kunye nokubi kakhulu - ukuba uthe wakhutshwa emgceni, uninzi lwamaqonga awakuvumeli ukuba uphinde ubandakanyeke.
VOIP -Uya kucinga emva kwenkulungwane kunye nesiqingatha setekhnoloji yefowuni ukuba singayibetha. Asazi. Itekhnoloji yeVOIP ikuyo yonke indawo, kodwa ngumonakalo. Uhlala uqhagamshela kwinkitha yeenkonzo kunye namaleya, ukongeza ithuba letoni kwimicimbi. Kwaye, njengakwezinye iitekhnoloji zonxibelelwano, zivumela ukuthembeka okuphantsi ukujongana nobuchule bebhendi eyahlukeneyo yabathengi babo.
Ngombulelo, ipodcasting inyukele kwimbalasane yokuba kukho iinkonzo ezimbalwa eziphumayo ukoyisa le micimbi.
Iinkonzo zokurekhoda iPodcast
IBlogTalkRadio -Sinokulandela okukhulu kakhulu kwi-BTR kodwa ekugqibeleni sayishiya ngenxa yemicimbi esemgangathweni kwiqonga labo. Siye sanqamla ukushiya i-web-time interface kwaye iyonke sikhethe ukulayisha umxholo emva kokulayisha. Nangona kunjalo, ukuba usaqala, ufuna into elula kakhulu, oku kunokuba sisisombululo esifanelekileyo. Kwimfuno yethu yesandi esikhulu, yayiyinto ebambekayo.
Bodalgo -I-Bodalgo ayisiyo inkonzo eyakhelwe le nto… yayakhelwe ukufumana ilizwi kunye nokuguqula italente kwi-intanethi kwaye babhale iziphumo. Nangona kunjalo, iBodalgo ikhuthaze inkonzo yokuba abantu bayisebenzise. Ufumana i-URL eyahlukileyo apho undwendwe lwakho ludibanisa khona, lwenza imvume kwimakrofoni, kwaye uqhagamshelwe kwaye unokurekhoda isandi sokunyaniseka okuphezulu ekuhlaleni. IBodalgo ikwongeze amandla evidiyo kutshanje!
ipDTL - ipDTL izakuzama ukuseka ifayile ye- umhlobo kumhlobo Unxibelelwano phakathi kweendwendwe kunye nokubonelela ngonxibelelwano olusekwe kwi-Chrome ukurekhoda umsindo. Inkonzo iza nephepha lokubonisa elinikezelweyo kwaye iindwendwe zinokucofa ngaphakathi ukuba zingathanda.
IRINGI -Le nkonzo inokuba nevoti yam njengeyona ndlela ilungileyo, kodwa ayikabikho ngaphandle kwemida ethile. Isizathu sokuba ndoyame kweli cala kukuba iRINGR ibonelela ngohlobo lwedesktop kunye nesicelo esiselfowuni. Ukuba unokufumana undwendwe lwakho ukuba lukhuphele usetyenziso lweselfowuni kwaye banemakrofoni enkulu, useshishini!
Umthombo-Qhagamshela -Umgangatho we-ISDN oshishino ubuyisela indawo enesiseko esinzulu sayo yonke imo yokurekhoda umsindo kunye neemfuno zokujonga. Rekhoda kwaye ubeke iliso naphi na emhlabeni, usebenzisa izixhobo zakho zobungcali.
I-Zencastr Sabelane malunga I-Zencastr ngaphambili, inkonzo enkulu yokurekhoda kwi-intanethi yeepodcast. Ngelishwa, ifuna ibrawuza yedesktop efuna imvume kwimakrofoni.
Kuthiwani ngaloo microphone? Ukuba usebenza ngokuthe ngqo kwi-Mac yakho okanye kwi-iPhone, ndingumlandeli omkhulu we I-Mige 96k ka-Apogee. Ukuba uyipodcaster ekuhambeni kwaye ufuna ukurekhoda indwendwe enye okanye ezingaphezulu ngokuthe ngqo kwi-iPhone yakho, uShure undithumele MV88 umbhobho we-condenser, kwaye iyamangalisa!
Phawula: Uya kufumana uvavanyo olukhulu lweZencastr, RINGR, kunye ne-IPDTL ngaphezulu kwaNgoku, apho UAdam Ragusea ubhale inqaku elinzulu kwinkonzo nganye kunye nokubanakho kwayo.
Ukubhengezwa: Ngoku sililungu leRINGR kwaye sisebenzise eyethu uqhagamshelwano kule posi. Sikwasebenzise amakhonkco ethu amanyeneyo eAmazon kwimakrofoni.
tags: bloglogradioyomzimbaumnxeba wekhonferensiipdtlIntengiso yePodcastumhlobo kumhloboIinkonzo zepodcastPodcastingumsesaneSkypeteleconferencevoipzencastr
Mar 21, 2017 ngo-12: 39 AM
UDoug, iRadioYo lelinye iqonga elikuvumela ukuba urekhode umsindo. Ungasebenzisa iqonga ngeendlela ezimbini. Ungasasaza umboniso kwaye ube neendwendwe ezininzi kunye nabatsalela umnxeba ngaphakathi okanye ulayishe iziqendu zepodcast. Indlela oyisebenzisa ngayo iqonga ixhomekeke kuwe, kwaye nayiphi na indlela isimahla.